VaZuma Voyedza Kugadzirisa Zvanetsa muZimbabwe
VaZuma (L) naVaMugabe (R)
Mutongi gava pagakava reZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vakapinda munyika neChitatu kuzoedza kugadzirisa zviri kunetsa muhurumende pamberi pemusangano wevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica, weSADC Summit, wakatarisirwa kuitwa kuMozambique pakupera kwesvondo.
VaZuma vasvika panhandare yendege manheru apo vatambirwa negurukota muhofisi yemutungamiri wenyika, VaDidymus Mutasa, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, pamwe nasachigaro weZanu-PF, VaSimon Khaya Moyo.
VaZuma havana chavapindura pavabvunzwa nevatori venhau nezverwendo rwavo rwavari kushandisa mukuedza kugadzirisa makakatanwa ari pakati peZanu-PF nemapato maviri eMDC ari muhurumende yemubatanidzwa.
Mapato aya haasi kuwiririrana panyaya yegwaro rebumbiro idzva remitemo yenyika rakanyorwa richitungamirwa neCOPAC pamwe nemisariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika.
VaZuma vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, uye vakatarisirwa kusangana nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai pamwe nemutungamiri werimwe bato reMDC VaWelshman Ncube.
Zvinonzi mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vanonzi havana kupinda mumisangano naVaZuma.
Mutauriri weMDC yaVaTsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vanoti vachaudza VaZuma kuti Zanu-PF izadzise zvakabvumiranwa muchibvumirano chezvematongerwo enyika maererano nenzira yekunyora gwaro rebumbiro remitemo.
Mapato maviri eMDC anoti bumbiro rakanyorwa richitungamirwa neCOPAC iri rinofanira kuendeswa kumusangano wechipiri sezvariri. Asi Zanu-PF inoti bumbiro iri rinofanira kumbokwenenzverwa.
Asi mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti bato ravo riri kuramba rakatsika madziro nerekuti gwaro iri rikwenezverwa kusati kwaitwa musangano wechipiri we All Stakeholders Conference vachiti havasi kufara nezvinhu zvakawanda zviri mugwaro rebumbiro iri.
VaGumbo vaudzawo Studio 7 parunhare kuti vane chivimbo chekuti VaZuma vachakwanisa kuita kuti veMDC vanzwisise zvakanakira kuenda kumusangano wechipiri weAll Stakeholders Conference mapato ese achiwirirana.
VaMwonzora vanotiwo havasi kufara nekuti zvakabvumiranwa pasi pechibvumirano chezvematongerwo enyika zvinoita kuti munyika muitwe sarudzo dziri pachena hazvisati zvazadziswa. Vanotiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitwa munyika ichikonzerwa neZanu-PF pamwe nevari muchiuto.
Mushure mekushanya kwavo neChitatu, VaZuma vakatarisirwa kunopinda musangano wekomiti yeSADC inowona nezvematongerwo enyika, runyararo nekuchengetedzeka kwedunhu, uyo wakatarisirwa kuitwa neChina muMaputo.
Munyori mukuru weSADC, VaTomaz Salomao, vanoti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kutarisira kuti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye hapachina zvekuwedzera nguva yehurumende yemubatanidzwa.
VaSalomao vanoti vatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa vakavavimbisa kuti referendamu ichaitwa muna Gumiguru sarudzo dzozoitwa mukati memwedzi mitanhatu kana misere.
Masangano akazvimirira oga muZimbabwe abatana nemamwe ekuchamhembe kweAfrica mukukurudzira SADC kuti iunze hutongo hwejekerere.
Masangano aya atove kuMaputo. VaDewa Mavhinga vanokokera mabasa nekuburitswa kwemashoko musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchambembe kweAfrica vanoti vacharatidzira kunynyuta kwavo kumusangano uyu nekufora mumigwagwa.